Kulamo siyaasadeed oo Qoorqoor ka dhan ah [Muqdisho] | KEYDMEDIA ENGLISH
Kulamo siyaasadeed oo Qoorqoor ka dhan ah [Muqdisho]
Siyaasiyiintaan, waxa ay si adag kaga soo horjeedaan Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor, kaas oo lagu eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaanka maamulka labada gobol, isla-markaana uu intii uu ku fadhiyay kursiga ugu sarreeya maamulka uu u adeegay kaliya Kooxda Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Siyaasiyiin ka soo jeeda degaannada Galmudug, oo ay ku jiraan Wasiirro iyo Xildhibaanno, ku soo shaqeeyay xilal Federaal iyo heer Maamul Goboleed, ayaa Muqdisho ka wada kulamo ka dhan ah Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor.
Siyaasiyiintaan oo intooda badan xubno ka ah, Madasha Badbaadada Dowlad Goboleedka Galmudug, oo billowgii sanadkaan looga dhawaqay Caasimadda, ayaa todobaadkii la soo dhaafay sare u qaaday cadaadiska ay saarayaan Qoorqoor, oo ay ku eedeeyeen, hoggaan xumo iyo karti la’aan.
Siyaasiyiintaan, oo ay hore uga dhex muuqdeen shaqsiyaad miisaan culus leh, sida Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, ayay hadda ku biireen kuwo kale, oo caan ah, sida; Maxamed Siciid-yare, Maxamuud Kudun Xiimaa iyo Cali Maxamed Baarleex MW-nihii Ximan iyo Xeeb.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen xubno ka tirsan, Madasha Badbaadada Galmudug, u jeedka kulamadaan ayaa ah in Madashu aysan kaliya ku ekaan Caasimadda ee looga dhawaaqo, qar ka mid ah degaannada maamulka sida; Magaalooyinka Gaalkacyo, Cadaado iyo Dhuusamareeb.
Qoorqoor, wuxuu hore u diiday farriimo ay odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, aqoon-yahannada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Galmudug u gudbiyeen, oo ah inuu ka baxo qolka siyaasadeed ee Fahad iyo Farmaajo ku xireen, una adeego bulshada uu kursiga ku matalo.
Qoorqoor, wuxuu qeyb ka noqday, hoggaanna u yahay maamullada uu Farmaajo u adeegsado, hurinta xiisadaha siyaasadeed iyo isku hor goynta dhamestirka doorashooyinka, wuxuuna muddo dheer si gooni ah u dhibaateynayay Ra’iisul Wasaare Madaxmed Xuseen Rooble.
Tan iyo markii Qoorqoor galay xaafiiska Madaxweynaha Galmudug, Al-Shabaab ayaa kala gooyay isku socodka magaalooyin muhiim ah oo dhaca Galmudug, waxa ay la wareegeen degaanno aysan waligood ka arrimin, halka uu wali u muuqdu inuu xakameyn la’ayahy dhaqdhaqaa kooxda Ahlusunno.